Dhageyso:Hadaba soo ma,ahan shantii shirtay Howshoodu waa shiiqin (Faalo) | Radio Danan (DBN) 94 FM
Home / QORMOOYIN / Dhageyso:Hadaba soo ma,ahan shantii shirtay Howshoodu waa shiiqin (Faalo)
Posted by: DBN in QORMOOYIN, WARARKA, WARARKA CAALAMKA, WAREYSIYO October 31, 2017	Comments Off on Dhageyso:Hadaba soo ma,ahan shantii shirtay Howshoodu waa shiiqin (Faalo)
Soomaaliya waa wadanka kaliya ee ay ka jiraan lix maamul goboleed iyo kuwo yar yar oo aan wali aqoonsi ka helin dowladda dhexe iyo wadamada Soomaaliya Caawiya.
Dowladda ugu maamul goboleedka Badan caalamka Waa wadanka Mareykanka Madaxada Maamulada Mareykanka waxaa loogu yeeraa Gudoomiyaasha gobolada Ama Maamulada Halka ku weena loo diiwaan galiyay Madaxweyniyaal Dowlad Goboleedyo.
Malaha ujeedka waa in Soomaaliya Aanan Degin wayna adagtahay in lamaamulo qof wata magaca sare sida Madaxweyne oo waliba uu wax ka sugo qof ay isku magac ama isku heer taagan yihiin sida ay isku arkaan Madaxda Maamulada Soomaaliya horaa loo yiri Quraan Alif ka xumaaday Albaqara kama hagaago.
Lixda Maamul Goboleed ee soomaaliya shan ayaa waxay hoos yimaadaan Dowladda dhexe sida uu tilmaamayo Dastuurka nooyaala Maamulada Soomaaliland iyo puntaland ayaa ugu horeeyay Maamul goboleedyada ka dhismay soomaaliya.
Inta kale Jubbaland,Galmudug,Koonfur galbeed iyo hir-shabeele waxaa la dhisay waqtigii Xasan Sheekh Maxamuud uu dalka ka ariminayay Madaxda waqtigaas Madaxda Maamulada waxay ula dhaqmayeen Madaxda la,aantooda talo lagaari Karin waa meesha Talada ka xumaatay Abaabkuna ugu dhumay Madaxada Maamulada Halka Madaxda Hadda jiraahina iyana labo jeer shir wada tashi ay ugu yeereen odayaasha gobolada Maamula xukma.
Laakiin meesha sarta ka quran tay ayaa waxay tahay ka dib markii madaxda hadda jirta ee Soomaaliya Go,aan kaligood ah ay ka gaareen Arimaha khaliijka iyadoo laga tala galinin Duqowda Gobolada Maamula dabcan Madaxda Soomaaliya go,aan way gaari karaan sida Dastuurka uu ku cadyahay.
Duqowda isu arka la,aantooda in aan wax la sameynkarin maku qoran yahay dastuurka uyaala soomaaliya yaasa yiri sheeg sheega qodoboda iyagu aan awood uyeelanKarin misa Abaabkii ka dhumay ayay daba taagan yihiin iyo dabeecadihii labaray waa iga su,aal.
Sharci yaqaanada soomaaliyeed waxay sharaxeen in madaxda Maamulada Naftooda Been ka dhaadhiciyeen Marhaddii sidii hore aan talo badan dhankooda looga baahneen.
Markii xaal halkaas uu marayo Madaxda Maamulada waxaa galay shaki ah in Hadhow ay imaankarto in loo bedelo Gudoomiyaal goboleed waana tan keentay in kismaayo ay ku shiraan oo ay la baxaan madal loo bixiyay Qurax forum.
Sidaas darteed waxay istusiyeen in madaxda Soomaaliya ay ku furan buuq siyaasadeed si ay isu baraan kolay madaxda Soomaaliya dareen waa uu galay wayna dhacday oo waatii madaxweynaha uu war saxaafadeed uu ku sheegay in midnimada la ,ilaaliyo Ra,iisul wasaaruhuna uu xaflad ku soo hadal qaaday arimaha Maamulada.
Hadda shirka ka socda Muqdisho waxa ugu mihiimsan ayaa waxaa ka mid ah 4 ka reeboon madaxda Maamulada oo kala ah Arimaha dibadda,Gaashaan dhiga,Dhaqaalaha iyo siyaasadda,socdaalka iyo jansiyadaha wayna adagtay in si dhib yari ah la,isku fahmo marka loo eego qabweynida ka muuqata Madaxda Maamulada.
Waxaasa ka sii fiican in madaxdaan madax adeega uu ka muuqdo 4 ka reeboon loogu daro labo qodob oo kale cadaaladda iyo faya dhowrka deegaanka waana meesha kaliya ee ay hayin ku noqon karaan Madaxda Gobolada Hadii kale waa jug jug meeshaad joog sida in badan oo wax baratay ay qabaan
Hadaba soo ma,ahan shantii shirtay Howshoodu waa shiiqin.
Previous: Dhageyso:Hogaamiye Axmed Madoobe oo Fariin Muhiim ah u diray Shacabka Soomaaliyeed
Next: Maxa ka jira Maanta Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari ?